Maxaa kasoo Baxay Kulankii Muqdisho ku dhexmaray RW. Rooble iyo Sheikh Shariif (Dhegayso) | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Maxaa kasoo Baxay Kulankii Muqdisho ku dhexmaray RW. Rooble iyo Sheikh Shariif (Dhegayso)
Muqdisho ( Kalshaale ) Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, waxayna ka wadahadleen sidii la isaga kaashan lahaa nabad geliyada Muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka.
“Labada masuul waxay ka wadahadleen duruufaha haatan dalku ku jiro, amniga caasimadda, xasilinteeda iyo sidii horay loogu socon lahaa, iyadoo la ogyahay in dhawaan ay ka dhaceen xasarado, waxaana ra’iisul wasaaraha ka go’an in wax walba nabad lagu dhameeyo, diyaar garowna loo sameeyo shirarka Qaran ee dib u heshiisiinta ee dhici doona, waxuuna sii wadayaa kulamada iyo xiriirka uu la yeelanayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed,” ayuu yidhi Mucalimuu.
Kulankaan garabka mucaaradka waxaa Sheekh Shariif ku wehliyey musharax Mustaf Dhuxulow, waxuuna sheegay afhayeenka xukuumadda Mucalimuu inuu ku soo dhamaaday is af-garad, isla markaana mas’uuliyiintan ay isku afgarteen qodobadii ay ka wadahadleen.
HALKAN KA DHEGAYSO XOGTA KULANKA
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=43240
16 Comments for “Maxaa kasoo Baxay Kulankii Muqdisho ku dhexmaray RW. Rooble iyo Sheikh Shariif (Dhegayso)”
May 3, 2021 - 4:29 am
May 3, 2021 - 8:15 am
Durba waxaa lala baxsaday Gaadiid badan iyo hub.Waxaa loo diyaaar garoobayaa xagga iyo bililiqada lol. In lagu habsado meelihii la dhisay iyo Bakhaaro kkkk
Markaan aad ugu fiirsaday dhacdooyinka Somaliya ka sicda,waxaa sal dhig u ah nacayb Daarood dad badan sud xanuunka ku soo kaca.
Isaaqa iyo Hawiyaha waxaa madax maray uqdad ay u qabaan Daarood.Waa narka xoog loogu dhaadhaco waxa lagu kiciyo ama lagu dagaal galiyo Bulshooyinkaasi.Waa neesha la taabto si dadkaasi loogu hayo Xero qaxooti ama lagu dagaal galiyo.
Daaroodbaa soo socda kkk
Hada runtiina – maba jiro wax la yidhaa Daarood oo dhaafsan magaca oo aad maqasho.
Raxanwayntu sidaa maaha.Aadbay uga duwan tahag 2daa Bulsho.
May 3, 2021 - 10:12 pm
Waxaa wax lagu qosla ah ninkan magaciisu yahay BAHAL, war heedhe ma is doqomeysineysaa misaa doqonimo dhab ah ayay kaa tahay DAAROOD kuwii isgatay oo isbeylihiyay sow ma aha, afka baarkii ayay kaa tahay, Soomaali waxa ay isu tahay ayaa DAAROOD isu yahay ee ummadda Soomaaliyeed caqliga faasidkaa hala dhex imaan., qabiil baad sheegi ee dib ugu laabo dhaqanka Daarood isku hayo.
May 3, 2021 - 8:40 am
Mr bahal boowe nin aqli badan baad tahay qabyaladana ka maran 😂
Inkaato jiirku ii xanuno mararka qaar waa hore baa iska miray dhiga xaaji hiirab
Waa sidaas waxay u xiisen bililaqadi daarood waa magac hawiye marku maqlo horay lee ka cabaysana qorikisa 😂
Daaroodku afka ka sheekan oo awalba jeegaan la isku aruurshay bay ahayeen
Xaaji hawiye maalkisa iyo dhulkisa ku casumay wax ay ka baqana ma jiro
May 3, 2021 - 12:12 pm
Farmaajo iyo siyaad barre cid uga roonayd xamar masoo marin, laakiin dhibka jiraa wuxuu yahay 2 arrimood,
1 Hawiye wuu ku yar yahay nin siyaasiya oo daacad ka tahay inuu qaranka u adeego isagoon wax boobin iyadoo ayba usii dheer tahay aqoon daro xaga dowladnimada iyo ismaamulka biniaadamka oo noloshoodu fowdo badani ku jirto sida dadka dadka qaaqaawanee aan weli xadaarad lahayn.
2- Hawiye wuxuu kala saari la, yahay waxa soomaali ka dhexeeeya ee lawada leeyahay iyo wixii iyaga gaar u ah, maba oga in madaxweyne Farmaajo AMA C/aahi yuusuf ay doorteen ummada somaliyeed oo dhan(4.5)
Siaad sheegtayna Waxaa hadaladooda ku badan Daarood baa saa nagu sameeyey walaahay intaan fekeray baan waayey hal shay oo nimankas nin daaroodihi ku sameeyey aan ka ahayn horumar ahayn iyo dowladnimo iyo qurux
May 3, 2021 - 12:35 pm
Rooble u ekaa Nuur cadde
Madaxweyne Shiikh Shariif u ekaa
Mujaahid Shiikh Shariif
Xamar Irir Samale u ekaa
Jabuuti Irir Samale
Farmaajo u ekaa C/llaahi Yuusuf
– Hawiyoow Dulqaadkiina, Daqligiina iyo Dhulkiina
ayay ku wada joogaan 5ta Soomaaliyeed
ee Doorashada naga boobsiiya.
Maxaad uga reebtay
Hargeisa isxaaq bn Axmed
Hawiye maxaa ugu haysataa
Maxaadse ku darsatay ileyn
Tuuladaadii Boorama ma tegi
Kartid oo anaa ku xidhayee.
Isaaq iyo hawiye Daarood bay ka baqaan.
Daaroodka waaweyn waa dad dhaqan
Iyo jiho loogu soo hagaago leh
Aka: majeerteen, ogaadeen iwm.
Lakiin daaroodka yar yar
Aka: daaroodka qaawan
Miyaad filaysaa inay wax kuu qabtaan.
Hadday saa tahay, gabalbaas baa kuu dumay.
Waxaan wali idinka sugeynaa
Inaad Hargeysa ku qabataan
Shirka Caasimadaha Afsoomaaliga
Shir qabta oo qeybtiina qaata
Jabuuti waxay qabatey ugu YARAAN
10 shir oo 4 afar ka mid ah ay ku wada hadlahayeen
Somaliland iyo Somalia.
– Waliba waxba kama qabno inaan
Hall ka shirka la SURIN CALANKA BLUE
maadaama UU WATO SANBUUR ama HAYFEVER
” Shirka qabta Dal gooniya ayaad tihiine.
May 3, 2021 - 2:02 pm
May 3, 2021 - 3:37 pm
Taariikhda Dalka iyo Dadka
wax ka Baro.
Naga saxa waxaan qaladney
ama ka tagney.
Anuu Hawiye ma haysto.Hawiye ayaa wax iga haysts.Hawiye kuma haysto hanti iyo magaalo u leeyahay.Hawiye wuxu xuurto ku haystaa hanti,sharaf iyo qaranimo naga dhesxaysa.Hawiye kuma haysto Guriceen,Matabaan Harti,(magacaasi Buugaagtii iyo qaraaladii aad u horeeyay ayaan ka helay),kuma haysto Jawhar e waxan ku haystaa Muqdidho iyo qarannimada Somaliyeed ee naga dhaxaysa.Ololshayga meel ataan u wadaa,waanan ku guulaysan..
Waxaan wadaa inaanu cod Somaliyeed helin Mooryaan Hawiye ah oo edaab daran.
Adiga atention ayaad iga rabtaa,sorry.
Adiga maxaan kaala hadlaa?
Somaland,waa loo iman maalinteeda.Waa Reero wada yaala oo xero qaxooti ku jira.
Waxaa dhici karta dadka qaarkii in eey waxoogaa wadanninimo ku jirta oo lexojeclo dalka u hayaan, laakiin sidda eey u raadinayaan waxa eey rabbaan oo aanan aheeyn waxyaabaha beenta ah ee caasimadii ayaa qabiil xoog ku heeystaa, iyo wararka raqiiska ah ee sidda in 100 kiiba boqol guryo dad laga heeysto [yes waa jirtaa in dad guryo ka maqan yahiin, laakiin, marka la fiiriyo daraasaadyo afka ah oo aan sameeyay guryahaas kama badna hal percentaga].
Now dadkaas aan sheegay ee rabbi lahaa in eey Somaliya hagaagto horta inward, si gudahooda ah ha’is fiiriyaan. Wax haka badallaan sidda eey u raadinayeen waxa eey aaminsanyahiin in eey ka maqanyahiin. Ha fiiriyaan in hadii wadanka federal yahay, then Xamar waxba ka duwanna Berberro iyo Hargeeysa, iyo Boosaaso iyo Kismaayo. Federal waa isla xisaabtan, iyo wax isku darsasho. Ciidan, canshuur, dhib iyo dheef iyo wax kasta.
Waa sheeko daanyeernimo sheekadda caasimad lama sheegan karro. Xataa waxaan ka maqlayay daanyeer Farmaajo oo nacasnimadaas ku hadlayay. Waana sababta eey ilkayarta iyo eelaay badan oo dhibka Mogadisha qeeyb ka ah eey muddo baddan u soo dagayeen Xamar.
Sidsa eey Meles Senawi qiimo badan ugu kacday in uu ogaada Hawiye habba caqli xumaadee eey yahiin askarta iyo xooga Somaliyeed, ayeey dad baddan u ogaan dad doqommo, iyo wacallo badan ka buuxaan waad qaldi kartaa mararka qaarkood, laakiin wax shaqeeynaya muddo dheer maahan oo sustainable maahn. Sooner or later, hal caqli badan ayaa kasoo dhex baxaya, dadkaas doqomadda baddan ee xooga baddan, waana dagaal kale iyo shiddo kale. Sidda Japan, 250 sanno eey qabqablayaal dagaal iyo fagaalo wabiol ugu jirreen ayaa dhaceeysa hadii aanan lug gooyadda eey Somalida qabiiladooda ku hayaan Hawiyaha eeysan joojin.
May 3, 2021 - 11:14 pm
waan ku salaamay saaxiib
in yar baa idiin hadhay washamsidii aad bilawdeen waar niyoow reer muqdisho ilaahay waxbuu tusay sodon sano kama soo wareegan markay gacmahooda ku doorteen mid aaminsan buugii siyad XHKS.
qofku wuxuu cawaan noqdaa markuu taariikhda wax ka baran waayo iyo dhacdooyinka hor yaala
waxaa sii cajiiba kuwo meeshan wax ku xar xariiqa oo reero sharaf iyo cise leh ku aflagaadeeya oo aaminsan in wadan koodhan aarmaajo ugandan soldiars suuliga geeyaan uu qaban doono xitaa somaliland
inkastoo bishii u danbaysay qaarkood riyadii ka yara tooseen …
reer muqdisho waxay ku amaanan dulqaadka ay doorkan muujiyeen ee ay ku furdaaminayaan mushkiladan ay iyagu abuureen
ku dawarsigii yaa soomaliyaay waa dhamaaday